MAHAFINY SCS Tupolev Tu-134A-3 FSX & FSX-Steam - Rikoooo
SCS Tupolev Tu-134A-3 FSX & FSX-Steam Version 2.0 + mods & fixes
Downloads 15 948
Auto-hametraka Installer version 8
Fa FSX SP2 & FSX-Steam
Mpanoratra: Soviet Classics Simulation (SCS) FSX fanavaozana nataon'i Connoisseur & Rikoooo
Ity angamba no iray amin'ireo tsara indrindra freeware no add-ons ao amin'ny Internet, Ny Tupolev TU-134A-3 amin'ny turbofan Soloviev D-30 milina. Ny efitra keliny izy ary nalaina tahaka cockpit dia tanteraka ao 3D amin'ny HD textures, anisan'izany ihany koa ny tena feo, fihetsik'ireo sary mihetsika, sns vokatry na inona na inona no tsy ampy, izany ampiana-on dia mahatalanjona.
Tamin'ny voalohany, ny fiaramanidina virtoaly dia noforonina ho an'ny FS2004, avy eo amin'ny endrika ofisialy ho an'ny FSX natao nefa tsy dia ampy tsara, izay no antony hanaovana ity fonosana ity FSX ahitana ny fanamboarana ny bug avy ao amin'ny Connoisseur natolotry ny Forum Avsimrus.com ary ampiharina amin'ny fiaramanidina nataon'i Rikoooo. Ny rakitra SCSTu-134FSXMods.pdf dia manonona ny fanitsiana tsirairay.
Ity add-on ity dia vonona sy maharitra mandritra ny fotoana voalohany FSX ary FSX-Steam miaraka amin' ireo fanitsiana vaovao ireny.
Tsy filaza mandidin 'ny mamaky ny boky hifehy milina ity, Ny boky voasoratra ao Rosiana teny, na izany aza, ary na dia sarotra ny nahita fandikan-teny, Rikoooo nahazo PDF sasany boky nadika tamin'ny teny Anglisy. Fa raha efa fantatrao ny Tupolev TU-154 v1.1 misy eto dia hanana be dia be ny zavatra tsy hianatra, satria samy fiaramanidina dia kely toy izany koa.
Fa Tadidio, ny antontan-taratasy ho an'ny tsirairay ampiana-on alaina avy Rikoooo dia tsy ho azo avy amin'ny add-eo ny fampirimana (oh C: Program Files (x86) Microsoft Flight simulator XSimObjectsAirplanes GamesMicrosoft "anarana ampiana-on"), na avy amin'ny Start sakafo ny Windows - fandaharana rehetra - Rikoooo Add-on.
To araka ny tokony ho add-miasa ity amin'ny zavatra ilaina mba hametraka XMLTools, ny mandeha ho azy Rikoooo installer dia tonga dia manampy ny ilaina antontan-kevitra ao anaty ny tahiry DLL.xml
Ny Tupolev Tu-134 (OTAN fehezan-dalàna Crusty) dia Sovietika mpandeha fiaramanidina fiaramanidina, mitovy amin'ny Amerikana DC-9 Douglas. Izy no iray amin'ireo fiaramanidina ampiasain'ny ankamaroan'ny firenena ao amin'ny Dinan'i Varsovie. Ny isan'ny fiaramanidina toy izany amin'izao fotoana izao eo amin'ny fanompoana dia nihena noho ny tabataba tsy fahatanterahany fepetra takiana.